त्रिएक परमेश्वरबारे झुटा शिक्षा - Nepali Christians Site
त्रिएक परमेश्वरबारे झुटा शिक्षा
Posted by surendra Raut on October 11, 2013 at 1:00am
त्रिएक परमेश्वरको शिक्षालाई अस्वीकार गरेर धेरै झुटा मण्डलीहरुले परमेश्वरको व्यक्तित्वबारे भुल विचार गरिरहेछन् । जेवहा वीटनेस र मर्महरुले साथै अरु धेरैले यस शिक्षाको विरोध गर्छन । निम्लिखित विचार जेहोवा वीटनेसहरुद्धारा प्रसर गरिएको हो । “त्रिएक परमेश्वरको शिक्षा येशु तथा प्रथम विश्वासीहरुद्धारा आरम्भ भएको होइन । धर्मशास्त्रमा कहि पनि त्रिएक परमेश्वरको चर्चा भएको छैन ।” (Let God be true and every men be layer 100-111, Impossible for God to Layer 255-269)
बाइबलको साँचो शिक्षाः
साँचो परमेश्वर बारे निम्निलिखित शिक्षाहरुप्रति ध्यान दिनाले यो माथिको कथन प्रत्यक्ष रुपले झुटो र असत्य हो भनी हामी बुझ्न सक्छौ । बाइबल अनुसार केवल एक परमेश्वर हुनुहुन्छ (व्यवस्था ६:४, यसैया ४४ : ६), तर यही परमेश्वर तीन विभिन्न व्यक्तिहरुमा प्रकट हुनुभएको छ– पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर (मत्ति १८:१९, २ कोरन्थी १३ :१४) यसैलाई त्रिएक परमेश्वर तथा त्रिएकत्व भन्दछ ।
त्रिएक परमेश्वरको निम्ति बाइवलका प्रमाणहरु
१. नयाँ नियमले स्पष्ट रीतिले त्रिएक परमेश्वरबारे शिक्षा दिएको छ (मत्ति २८:१९, युहन्ना १४:१६,२६,१६:७–१५, २ कोरन्थी १३:१४, एफिसी ४:४–६, १ युहन्ना :M७)
२.त्रिएक परमेश्वरका प्रत्येक व्यक्तिका बेग्लाबेग्लै व्यक्तित्व छ (यूहन्ना १६:७–१५)
३. त्रिएक परमेश्वरका प्रत्येक व्यक्ति एकअर्कासंग बराबरी हुन्छन् (यूहन्ना ५:१७,१८, फिलिपी २:६,७)
४.पुरानो नियममा पनि त्रिएक परमेश्वर बारे शिक्षा दिइएको छ ।
हिब्रु भाषामा परमेश्वरलाई एलोहीम भन्दछ । यो बहुबचन हो तर एकबचनको क्रिया प्रयोग गरिन्छ । यसले हामीलाई एक परमेश्वर विभिन्न व्यक्तिहरुमा भएको कुरा सिकाउछ । जस्तै यहा १:३ मा परमेश्वर पिता बोल्नुभयो “उज्यालो होस” यो बोलिएको बचननै परमेश्वर पुत्र हुनहुन्थ्यो यूहन्ना १:१ “आदिमा बचन थियो” उत्पति १:२, “परमेश्वर पवित्रआत्मा अथाह समुद्रमाथि घुमिरहनुहुन्थ्यो ।” यहा सोझै पवित्र आत्मालाई सम्बोधन गरिएको छ ।
उत्पति १:२६– यहा परमेश्वरलाई बहुबचनमा सम्बोधन गरिएको छ -एलोहीम– तरै पनि पुरानो नियमका अरु पदहरुबाट हामी परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ भनी जान्दछौ (व्यवस्था ६:४) ।
शाब्दिक रुपले यो पद यसरी अनुवाद गर्न सकिन्छ– “परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एक संयुक्त परमेश्वर हुनुहुन्छ ।” यहा एक भन्नाले एकता बुझिन्छ । उल्पति २:२४ मा यही शब्द एक लोग्ने र स्वास्नीको एकताबारे बताउँदा प्रयोग गरिएको छ । यो पदले परमेश्वरबारे बाइबलको शिक्षालाई संक्षेपमा यसरी प्रस्तुत गर्छ– उहा एक हुनुहुन्छ र तीन व्यक्तिमा बास गर्नु हुन्छ ।
भजन संग्रह ४५:६,७ र हिबु्र १:१८,१९ अनुसार परमेश्वर पिता यस पदमा पुत्र परमेश्वरबारे बोल्दै हुनुहुन्छ ।
यहा परमेश्वरको पुत्र प्रभु येशुले परमेश्वर पिता र पवित्र आत्माबारे बताउनु हुदैछ (यूहन्ना १८:२० सित तुलना गरेर हेर्नुहोस)
५.ख्रीष्टको जीवनमा पनि त्रिएकत्व देखिन्छ ।
क.उहाको जन्ममा (लुका १:३५)
ख.उहाको बप्तिष्ममा (मत्ती ३:१६,१७)
१.पिताः (प्रेरित २:२४, एफिसी १:१७–२०, हिब्रु १३:२०)
२.पुत्रः (यूहन्ना २:१९,२१,१०:१७,१८)
३.पवित्र आत्माः (१पत्रुस ३:१८, रोमी ८:११)
६.त्रिएकत्वमा प्रत्येक व्यक्तिले एउटै कामहरु गर्छन ।
१.पिता (भजनसग्रह १०२:२४,२५)
२.पुत्र (कलस्सी १:१६)
३. पवित्र आत्मा (अøयूव २६:१३, उत्पति १:२ भजनसग्रह १०४:३०)
ख.विश्वासीहरुमा बास गर्ने
१.पिताः (रोमी ८:११
२.पुत्रः (रोमी ८:११)
३.पविब आत्मा (रोमी ८:९)
ग.मुक्तिको कार्यमाः एफिसी २:१८
घ.नयाँ बाचाः (हिब्रु ९:१४)
ङ.चुनाव (१पत्रुस १:२)
एकमा तीन परमेश्वर:
जेहोवा वीटनेश तथा अरु झुटो मण्डलीहरुले त्रिएकत्वको शिक्षालाई तीनवटा ईश्वरको शिक्षा भनी विरोध गर्छन । त्रिएकत्वको शिक्षा पनि बहुदेवहरुको मूर्ति पूजाको शिक्षा जस्तै हो भनी विश्वास गर्छन । यसबारे जेहोवा वीटनेसहरुका कथनहरुको विचार गरौ ।
ख्रीष्ट धर्मको एउटा मुख्य शिक्षा पवित्र त्रिएकत्व हो । यसलाई धर्मशास्त्रअनुसार सत्य हो भन्छन र लाखौ मानिसहरुले यसलाई पवित्र ठान्छन संक्षेपमा यो शिक्षाको सारांश यो हो “एक परमेश्वरमा तीनवटा परमेश्वरहरु हुनुहुन्छ”, “पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर ।” तीनै व्यक्ति शक्तिमा, योग्यतामा र अस्तित्वमा बराबर हुनुहुन्छ । त्रिएकत्वको उत्पति बेविलोनी मिश्रीहरु र अरु पौराणिक धर्मदेखि भएको हो । . (Let God be true and every manalayer 100-111,दोस्रो संस्करण)
यस चुनौतीको निम्ति हाम्रो उत्तर
जेहोवा वीटनेसहरुले बाईबल विश्वास गर्ने ख्रीष्टीयनहरुले मानिल्याएका त्रिएकत्वको विरुद्धमा अयर्थार्थ विवरण दिन्छन । तिनीहरुले भने झै त्रिएकत्वको साचो शिक्षामा “एकजनामा तनिवटा ईश्वरहरु” छैन ।
त्रिएकत्वबारे बाइबलको साँचो शिक्षा यही हो । परमेश्वर एकसाथै तीन व्यक्ति हुनुहुन्छ पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर । शास्त्रमा धेरै चोटि यो स्पष्ट बताइएको छ – परमेश्वर एक हुनुहुन्छ बहुबचनमा त्यसको अर्थ, तीन विभिन्न व्यक्तिहरु पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा, जसको शिर पिता हुनुहुन्छ, सवै एक अर्कासंग बराबर हुनुहुन्छ र प्रत्येकमा एकै विशेषता, शक्ति र महिमा छ ।
बेबीलोनीहर र मिश्रीहरुले तीन व्यक्तिमा प्रकट हुनुभएको एक पवित्र परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दैनथे । तिनीहरुले धेरै अनैतिक देवताहरुको उपासना गर्थे । ती देवताहरु मानिस,पशु साथै निर्जिव बस्तुहरु जस्तै नक्षेत्र, नदि इत्यादिको प्रतिरुपमा बनाइन्थे । साँचो ख्रीष्ट विश्वासमा त्रिएकत्वको शिक्षा न ता बेबीलोनी तथा मिश्रीहरुका देव उपासना देखि नै लिइएको हो, न ता अन्य जातिहरुका बहुदेव उपासनाबाटै नै हो, जसलाई परमेश्वर स्वयंमले “ईश्वर निन्दा” भन्नुभएको छ ।
तल उल्लेख गरिएका कुराहरु वेविलोनको ईश्वरहरुबारे प्रमाणि पुस्तकहरु देखि लिइएका हुन ।
“ती देवताहरको मुख्य प्राधिकार चाँहि अनैतिकता थियो । तिनीहरुमा मरणशीलहरुमा भैm हर प्रकारको अभाव र दुर्वासना थियो । तिनीहरु डरपोक हुन्थे–तिनीहर लोभी हुन्थे–मानिसहरुका भैm तिनीहरका पनि पत्नीहरु र बालबच्चा हुन्थे– मानव जीवनको विभिन्न पक्षको अधीनमा तिनीहरु पनि हुन्थे ।” (न्यू लेराउस एनसाल्कोपेडिया अफ मिथोलोजी ५४–६३ पेज)
त्रिएकत्वको शिक्षाबारे बेविलोनी र मिश्रीहरुसित मिल्ने सवै भन्दा नजीकको कुरो चाहि “ती महान देवताहरुको समुदाय हो ” मार्डुकले तिआमात माथि विजय प्राप्त गरेपछि संसारमा शान्ति र व्यवस्था पुनः स्थापित भयो र प्रत्येक देवताले आ–आफ्नो क्षेत्र पाए । विश्व तिन भागमा बाडियो र प्रत्येक भाग एकजना देवताको राज्य भयो ।
१.अनुको हिस्सामा आकाश पर्यो
२.थल, एनलीललाई दिइयो र
३.इजा, जलका अधिकारी भए । यसरी तीन देवताहरुका समुदायको संविधान गठन भयो ।
(न्यू लेराउस एनसाइल्कोपेडिया अफ मिथोलोजी ५४–५५ पेज)
यो त्रिएक ईश्वरको शिक्षा पनि होईन । यो अन्य जातिहरुको बहुदेवता उपासना भक्ति गर्ने अर्को विचारधार मात्र हो । कस्तो अचम्मको कुरो जेहोवा वीटनेसहरुले कसरी ख्रीष्टियहरुले मानि ल्याएका तीन व्यक्ति एक परमेश्वरको विचारधारा बेबीलोनमा भेट्टाए ।
मिश्रीहरुले पनि अनैतिक बहुसंख्यक देव देवीहरुको भक्ति गर्थे । मिश्री देवता र देवीहरु राखेको संग्राहालयमा कोहि पनि जान माँन्दैनन किनकी त्यहा चारैलितरबाट लाखौं देव देवीहरुको मूर्तिहरुले हाम्रो ध्यान आकर्षक गर्न खोज्छ । कतिवटा देव देवीको टाउको चाहि मान्छेको जस्तो छ, धेरै वटा चाँहि पशु वा चराको चुच्चो माथि विजयी भएर खडा भएका छन् । मिश्रीहरुले पनि प्राचिनकालका अरु सवै मानिसहरुले जस्तै देवताहरुको बयान सजिलैसंग गर्छन । तिनीहरुको निम्ति ती देवताहरुमा कुनै अलौकिक शक्ति छैन । विस्तारै नील उपत्यकामा ती देवताहरुको भक्ति गर्ने व्यक्तिहरुको संख्या घट्दै गयो र थुमोसिसको चिहानमा भेट्टाइएको सुचिपत्र अनसार सात सय चालिस जना भन्दा पनि कम मानिसले तिनहिरुको भक्ति गर्थे । (न्यू लेराउस एनसाइल्कोपेडिया अफ मिथोलोजी ९–१० पेज)
परमेश्वर एक हुनुहुन्छ र तीन व्यक्ति पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा बास गर्नु हुन्छ भन्ने शिक्षा बेविलोनी, मिश्री तथा अन्य कुनै बहुदेववादीहरुबाट आरम्भ भएको होइन । यो कुनै बहुदेववादी विचार पनि होईन । एक परमेश्वर तिन व्यक्तित्व केवल बाइबलमा मात्र यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ ।
यिनिहरुका मूर्ख प्रश्नहरु
जेहोवा वीटनेशहरुले त्रिएकत्वको शिक्षाको विरोधमा गरेका तर्कहरु बाईबलमा भन्दा मानव बुद्धिमा आधार भएका छन् । तिनीहरु भन्छन “परमेश्वर कसरी एउटै भएर पनि तीन व्यक्तिमा विद्यमान हुन सक्छ ?
उत्तरः हाम्रो बाईबलमा परमेश्वरबारे लेखिएको छ र यसलाई विश्वासद्धारा ग्रहण गर्नुपर्छ । बाईबलले नै धेरै प्रकारले यो परमेश्वरको सिद्ध बचन हो भनी दावी गर्छ । यसकारण बाईबलले परमेश्वर एक हुनुहुन्छ तरै पनि तीन व्यक्तिमा विद्यमान हुनुहुन्छ भनी गरेको प्रकाश हामीले विश्वास गर्नैपर्छ । सायद त्रिएकत्व चाहि उत्तर नदिइएको प्रश्नहरु मध्ये एउटा होला । अहिलेको निम्ति हामीले परमेश्वरको बचन साक्षीलाई जस्ताको तस्तै विश्वास गर्नु नै बुद्धिमता हो । परमेश्वरबारे सबै कुरो सम्पूर्ण रीतिले बुभ्mन चाहनु के यो न्याय संगत कुरो हो । हामी आफेले आफ्नो बारेमा सबै कुरो बुभ्mदैनौ तव कसरी हामीले सर्वशक्तिमान, अनन्त परमेश्वरबारे सबे कुरा बुभ्mने आशा गछौ ।
२ तिमोथी २:२३ मा मूर्ख र बेसमझका प्रश्नहरु झगडा उत्पन्न हुने कारणहरु सम्झी यसदेखि टाडै रहने चेतावनी दिइएको छ । मूर्ख प्रश्नहरुमा बाईबलको शिक्षाहरु उल्टाउर प्रयोग गरिएको हुन्छ । जस्तैः त्रिएकत्वबारे, पुनरुत्थानबारे, आश्चर्यकर्म र मृत्युबारे । प्रश्नहरु गर्नु राम्रो हो तर बाईबलका सत्यताहरुलाई अस्वीकार गर्ने प्रश्नहरु गर्नु दुष्टता हो । यदि बाईबलले “येशु परमेश्वर हुनुहुन्छ” भन्छ भने हामी को हौ र यो असम्भव छ भन्ने ? बाईबलले अविश्वसीहरु कहिल्यै ननिभ्ने आगोको ज्वालामा तड्पिन्छन भनेको छ । हामीले यसलाई ठीक दण्ड हो वा होईन भन्ने हामी को हौ ? हामा प्रश्नहरु बाईबलको अधीनमा हुनुपर्छ, बाईबलको विरोधमा होइन ।
पवित्र आत्माबारे शिक्षा
अव हामी पवित्र आत्मा अर्थात ईश्वरत्वको तेस्रो व्यक्तित्वको विषयमा चर्चा गरौ । पवित्र आत्मा पिता अनि पुत्रद्धारा विश्वासीहरुमा बास गर्नु तथा उनीहरुलाई मार्ग निर्देशन गर्न पठाइएका हुन् । धेरै मानिसहरु पवित्र आत्मामा विश्वास गरेर घोषणा गर्छन । उनीहरुले पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वरमा विश्वास गर्छन तर पवित्र आत्मालाई एउटा सेवक वा सन्देश वाहकको रुपमा विश्वास गर्छन । यो गलत हो, किनभने पवित्र आत्मा अन्य दुईको दाँजोमा समान हुनुहुन्छ र कुनै पनि रुपमा यी दुइभन्दा तल्लो दर्जाको हुनुहुन्न ।
तर आज पवित्र आत्माबारे झुटो मण्डलीहरुले अस्वीकार गरेको मुख्य विषय चाहि पवित्र आत्माको छुट्टै व्यक्तित्वको विषय लिएर हो । जेहोवा वीटनेसहरु, मर्महरु, आर्मस्ट्रङ्गको विश्वव्यापी मण्डली तथा अन्य मण्डलीहरुले पवित्र आत्मा, परमेश्वरदेखि आउने एक आवेश तथा शक्ति मात्र हो भनी सिकाउँछन् तर पिता परमेश्वर र प्रभु येशु ख्रीष्टदेखि आउनु भएको एक वेग्लै व्यक्तिको रुपमा मान्दैनन् ।
बाईबलको साचो शिक्षा
१.पवित्र आत्माको आफ्नै व्यक्तित्व छ ।
आजको मण्डलीहरु तथा कोहि मानिसले भन्दा प्रभु येसुले निश्चय नै पवित्र आत्माबारे ज्यादा जान्नुहुन्थ्यो । येसुले पवित्र आत्मालाई एक व्यक्तिको रुपमा बताउनुभयो । उहाले पवित्र आत्मा यस संसारमा आउनु भएको विशेष कारण र विशेष काम बताउनु भयो (युहन्ना १४:१६,१७,२६, १५:२६, १६:७–१५) उहाको आफ्नै केही विशेष विशिष्टताहरु छन् ।
क.ईच्छा शक्तिः १ कोरन्थि १२:११ “तर यी सब काम आफ्नो ईच्छा अुनसार हरेकलाई विभिन्न किसिमले बाँडिएर उही एउटै आत्माको काम गर्नुहुन्छ ।” (प्रेरित १३:२, १५:२८)
ख.बुद्धिः नहेम्याह ९M२० “तिनीहरुलाई शिक्षा दिन तपाईले आफ्नो असल आत्मा दिनुभयो ।” शक्ति वा प्रभावसित शिक्षा दिने ज्ञान हुदैंन । रोमी ८:२७ “र मानिसहरका हृदयको खोजी गर्नुहुनेले पवित्र आत्माको विचार के हो सो जान्नुहुन्छ, किनकी परमेश्वरको ईच्छानुसार पवित्र आत्माले सन्तहरुका निम्ति माध्यस्थता गर्नुहुन्छ ।”
ग.ज्ञानः १ कोरन्थी २:१०–१२ “किनकी आपैmमा भएको आत्माले बाहेक मासिहरुमध्ये कसले मानिसका कुराहरु जान्दछ र? त्यसरी नै परमेश्वरका कुराहरु परमेश्वरका आत्माले बाहेक अरु कसेले जान्दैन । पवित्र आत्मासँग ज्ञान छ र उँहाले कुराहरु जान्नुहुन्छ ।”
घ.शक्तिः प्रेरित १:८ “तर पवित्र आत्मा तिमीहरमा आउनुभएपछि तिमीहरुले शक्ति पाउनेछौ अनि तिमीहरु मेरा गवाही हुनेछौं ।” उहाँले पत्रुसलाई शक्तिशाली रुपमा परिवर्तन गरिदिनु भयो ।
ङ. प्रेम गर्ने सामथ्र्यः पवित्र आत्मा एक व्यक्ति हुनुहुन्छ किनभने उँहाले सोच्नुहुन्छ, अनुभव गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ र सन्ताप गर्नुहुन्छ । पवित्र आत्मा निश्चय नै एउटा प्रभाव मात्र होईन किनभने उहासित बुद्धि र भावनाहरु अनुभव गर्नसक्ने योग्यताहरु छन्, जुन जड शक्तिहरुका निम्ति अप्राकृतिक हुन्छन ।
२.पिता र पुत्र सित पवित्र आत्मा एक हुनु भएतापनि उहाँ पिता र पुत्र देखि बेग्लै हुनुहुन्छ ।
बाईबलको कतिवटा पंक्तिहरुमा पवित्र आत्मालाई परमेश्वरको आत्मा वा ख्रीष्टको आत्मा भनिएको छ । यसकारण, कत्तिले पवित्र आत्मा मानिसको आत्मा जस्तै, पिता र पुत्रको एक अभिन्न भाग मात्र हो भन्छन् । यद्यपि यो कुरो बाईबलमा छैन । बाईबलको धेरै पंक्तिहरुमा पवित्र आत्मा पिता र पुत्र देखि भिन्दै व्यक्ति भनी बताइएको छ । (मत्ती २८:१९, २ कोरन्थी १३:१४, १यूहन्ना ५:७, एफिसी ४:४–६, यूहन्ना १४:१६,२६,१६:७–१५)
३.पवित्र आत्माका भावनाहरु छन् ।
–उहालाई दुःखी तुल्याउन सकिन्छ । यसैया ६३:१० “तर तिनीहरु बागी भए र उहाँको पवित्र आत्मालाई दुःखित तुल्याए............।”
–उहालाई अपमान गर्न सकिन्छ, हिब्रु १०:२९
–उहाँलाई ढाँट्न सकिन्छ । प्रेरित ५:३ “पवित्र आत्मासँग झुट बोल्ने..........तिम्रो हृदयमा किन यसरी भरिदियो ?”
–उहाको विरुद्ध निन्दा गर्न सकिन्छ । मत्ती १२:३१,३२ “तर पिवित्र आत्माको विरुद्धमा निन्दा.................।”
यसैगरी एफिसी ४:२० मा पवित्र आत्मालाई शोकित नतुल्याउने चेतावनी दिइएको छ । यसले देखाउँछ उहाँ एक व्यक्तित्वहीन आवेश मात्र हुनुहुन्न । विजुलीको आवेशको केही भावना हुँदैन । यो शोकित बन्न सक्तैन।
त्यसैले मित्रहरु यस्ता प्रकारका थुप्रै शिक्षाहरु तपाई र मेरो मण्डलीमा आउन सक्छन् । यसवाट बच्नुहोस, बाईबल अध्ययनमा ध्यान लागाउनुहोस र उहाको बचन बुझ्न परमेश्वरबाट शक्ति, ज्ञान र बुद्धि माग्नुहोस ।
Tags: falsechurch, sermom Like2members like this
Comment by अरुणा राई राखाली on October 13, 2013 at 5:04am हो हिज आज दिन दिनै यो झुटो शिक्षाको तेजीको साथमा बडदै गैइ रहेको छन् ! झुटो शिक्षाको शिकार धेरै जस्तो प्रभुमा नँया बिश्वासीहरु हुन गएको छन् किनकि उनीहरुलाई बाईबल भित्रको धरै जस्तो सत्यता थाहा हुँदैन या त पुरानै बिश्वासीहरु पनि जसले बाईबलको रामरी अध्यान गर्दैन उनीहरु झुटो शिक्षाको शिकार बन्न गैइ रहेको छ यसैले प्रभुमा मित्रहरु हो आफुलाई यस्तो झुटो शिक्षाहरुबाट बचाँउन हो भने यसको एउटै उपाय छ् अनि त्यो उपाय हो पवित्र आत्मलाई आफ्नु प्रीय मित्र बनाँउ जसले हामीलाई कुन कुरा सत्य हो कुन कुरा झुट हो बताउनेछ ! प्रतिदिन बाईबल पडने आदात बनाँउ ! कानलाई प्रभुको बचन सुन्ने आदत बनाउ ! एकान्तमा बसेर प्रार्थना गरी पर्मेश्वरसँग समय बिताँउ ! मलाई झुटो शिक्षा अनि शैतानको भ्रमबाट बचाँउनलाई तपाईको असल दास अगुवाको रुपमा पठाई दिनु होस् जसको बचन सुनेर मैले सत्यता बुझ्न सँकु भनी पावल झै असल ईमानदार अनि सत्य बोल्नमा बहादुर गोठालो पठाई दिनु होस् भनी पिता पर्मेश्वरसँग प्रतिदिन प्रार्थना गरौ !
Comment by रसिक बस्‍याल क्रिस on October 12, 2013 at 12:01am परमेश्वरको महिमा होस्, धन्यवाद दाजु हजुरको लेखबाट म साह्रै असिस भए, परमेश्वरको महिमा होस् ! धन्य हुन् परमप्रभुको नाममा आउने होसंना धन्य हुन् परमप्रभुको नाममा आउने होसंना धन्य हुन् परमप्रभुको नाममा आउने होसंना आमिन RSS